यस्ता व्यक्तिलाई छिट्टै निम्तिन्छ चाउरीपनाको समस्या, जवानीमै बूढो बनाइदिन्छ ! | सुदुरपश्चिम खबर
यस्ता व्यक्तिलाई छिट्टै निम्तिन्छ चाउरीपनाको समस्या, जवानीमै बूढो बनाइदिन्छ !
2 मिनेट पाठ
✍️ नयाँ पुस्ता ३ पुष २०७७, शुक्रबार १९:२९
काठमाडौँ । उमेर ढल्किँदै गएपछि अनुहार , हात ,गोडा र शरीरमा पर्ने चाउरीलाई अधिकांश मानिसले सजिलै स्वीका गर्दछन् । तर जवानीमै छला चाउरियो भने निकै तनाव निम्तिन्छ । कतिपय व्यक्ति जवानीमै चाउरिएको अनुहार लिएर हिाड्न बाध्य छन् । आखिर किन चाउरिन्छ छाला ? चाउरिपन आउन नदिन के गर्न सकिन्छ ? र निम्तिसकेको चाउरीको समाधान के हुनसक्छ ? छालारोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा.राजन ताझियाले जवाफ दिएका छन् ।
चाउरी पर्ने कारण
छालाको भित्रपट्टि सतहमा कलेजिन र इलास्टिन नामका फाइबर हुन्छन् । यी फाइबरको काम छालालाई सपोर्ट दिने हो । तर, कलेजिन र इलास्टिन फाइबर कम भएपछि छालाले बिस्तारै आफ्नो स्थान छोड्न थाल्छ । छाला कमजोर र केही लचकदार हुँदै जान्छ । कलेजिन र इलास्टिन निकै नै कम भएपछि छालाले पूरै ठाउँ छोड्छ र चाउरी पर्छ । बुढेसकालमा कलेजिन र इलास्टिन प्राकृतिक रूपमै कम हुँदै गएर चाउरी पर्छ । बूढा व्यक्तिहरूको छाला पातलो र सुक्खा हुने भएकाले चाउरी पर्ने खतराबाट जोगाउन गाह्रै हुन्छ । कम उमेरका व्यक्तिको छाला चाउरी पर्दा पछाडितिर सोहोरिन्छ भने बुढाबुढीको तलतिर झोल्लिने गर्छ ।
जवानीमै छाला चाउरी पर्नुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । उमेरमै छाला चाउरी पर्नुको प्रमुख कारण सूर्यको अल्ट्राभाइलेट किरणको प्रभाव हो । अल्ट्राभाइलेट किरणले कलेजिन र इलास्टिन फाइबर घटाउन भूमिका खेल्छ । त्यसैले घामको सीधा किरणमा रहेर नियमित काम गर्नेलाई कम उमेरमै चाउरीपनको सम्भावना बढी हुन्छ । नियमित धुम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई पनि चाउरीपन चाँडै निम्तिन्छ । डिहाइड्रेसन र वातावरणको प्रभाव पनि चाउरी पर्ने अन्य कारण हुन् । कतिपयमा चाउरी पर्ने कारण जेनेटिक पनि हुन्छ ।
लगातार हाम्रा नजिकका मान्छेसँग तनाव बढ्ने गर्यो भने हाम्रो शरीरमा त्यस्ता हर्मोनहरु उत्पादन हुन्छन् जसले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ र तनाव बढाउँछ । यसका कारणले हाम्रो छालामा समयभन्दा पहिले नै चाउरीपना आउन थाल्छ ।
बिहानको खाजा नखाने
बिहानको खाजा नखाने मानिसलाई दिनभरि थकान र कमजोरी महसुस हुन्छ । यसले शरीरमा विभिन्न रोग पैदा गराउँछ अनि हामी समयभन्दा पहिले नै बूढो देखिन थाल्छौँ ।
लगातार घन्टौँसम्म एकै स्थानमा बसिरहनाले खाना राम्रोसँग नपच्ने समस्या हुन्छ । पाचन प्रणालीमा समस्या आउने भएपछि मोटोपना देखा पर्छ । यस्तोमा हाम्रो शरीर चाँडै रोगले ग्रसित हुन्छ अनि हामी छट्टै बूढो देखिन थाल्छौँ ।
दिनभरिमा ७ देखि ८ गिलास भन्दा कम पानी पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुन्छ जसले छालामा सुख्खापना बढाउँछ । छाला सुख्ख हुँदा चाउरीपनाको समस्या देखा पर्छ ।
मदिरा, गाँजा, चुरोट र ड्रग्स जस्ता नशाको लत लागेका मानिसको शरीरमा कार्टिसोल नामक हर्मोन बन्न थाल्छन् । यसले तनाव बढाउँछ र समयभन्दा पहिले नै मािनस बूढो देखिन थाल्छ ।